AirPods ga-ejikọ ọnụ na Apple TV na mbata nke tvOS 11 | Esi m mac
Otu ihe kacha amasị m maka sistemụ nrụọrụ bụ inwe ike ime ihe ndị dị mgbagwoju anya mfe. Ọ bụkwa eziokwu na ịzụta oge n'etiti ọrụ bụ oke nke ụbọchị. Na mgbakwunye na ime ka ihe siri ike dị mfe, ọ dị na DNA nke Apple. Mana ọ bụghị ihe niile zuru oke. Mgbe a tọhapụrụ AirPods, otu atụmatụ ndị ọrụ kachasị amasị bụ njikọta akpaka mgbe ụda isi dị na iPhone, Mac ma ọ bụ Apple Watch. The nhọrọ họọrọ ụlọ ọrụ bụ mmekọrịta na iCloud akaụntụ anyị ga-ekwukwa na nsonaazụ ya zuru oke.
Ma mekọrịta ha na akpaghị aka na Apple TV, ọ dịbeghị. Ọtụtụ ndị ọrụ na-eri Apple TV ọdịnaya na ekweisi iji lelee usoro ha kachasị amasị ha ma ọ bụ naanị dịka ọkpụkpọ Apple Music wee chọọ ka njikọ ahụ bụrụ akpaka. Ọfọn, anyị nọ na chi, n'ihi na nhọrọ akpaaka mmekọrịta ga-adị na tvOS 11, nke ga-adị malite ọdịda a.
Ruo ugbu a, mgbe ndị ọrụ kpebiri ijikọ ngwaọrụ ikuku ọ bụla site na Bluetooth, ha rụrụ otu ọrụ ahụ, n'agbanyeghị ịbụ AirPods ma ọ bụ igweisi ikuku ọ bụla ma ọ bụ ọkà okwu. Usoro ahụ bụ nke na-esote:
Havekwesiri itinye AirPods gị na ọnọdụ njikọta ma ọ bụ hụ ngwaọrụ ndị ọzọ.
Sapeta Apple TV, ọ bụrụ na ịmebeghị ya, na na ihuenyo ụlọ na-aga "Ntọala".
Pịa na "Njikwa na Ngwaọrụ".
Chọọ maka nhọrọ "bluetooth".
Mgbe Apple TV hụrụ ekweisi, ị họrọ ha.
Ihe anyị na-arịọ ndị mmepe tvOS bụ na ọ bụ ngwaahịa ọtụtụ ndị ọrụ, nke na-enye ohere itinye ihe karịrị otu akaụntụ iCloud nke mere na ezinụlọ dum nwere ike iji AirPod nke aka ha, ọbụnadị n'otu oge ahụ. Tụkwasị na nke a, nke a ga-eme ka ihe dị mkpa dị elu dị elu nye onye protagonist nke Apple n'ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » AirPods ga-ejikọ Apple TV na akpaghị aka na mbata nke tvOS 11
Apple na-aga n'ihu ịgbanye ebe nchekwa na nhazi ya na MacBook Pro 2017